Wakiilka Gareth Bale oo xaqiijiyay kooxda uu doonayo laacibka inuu ku biiro marka uu ka tago Real Madrid – Gool FM
Wakiilka Gareth Bale oo xaqiijiyay kooxda uu doonayo laacibka inuu ku biiro marka uu ka tago Real Madrid
(Yurub) 16 Sebt 2020. Wakiilka Gareth Bale ee Jonathan Barnett ayaa xaqiijiyay in laacibka reer Weles iyo kooxda Real Madrid uu doonayo inuu ku laabto naadigiisii ​​hore ee Tottenham Hotspur.
Bale ayaa si xoogan loola xiriirinayaa inuu ka tagayo Real Madrid inta lagu jiro suuqan xagaaga, maadaama la fahansan yahay inuu si toos ah kaga baxay qorshaha tababare Zinedine Zidane, xilli Jose Mourinho uu doonayo inuu ku soo celiyo safka Spurs.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Wakiilka Gareth Bale ee Jonathan Barnett, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan hada wadahadalo kula jirnaa Real Madrid iyo Tottenham, waa kooxda uu doonayo Gareth inuu aado, Bale weli wuu jecel yahay Tottenham”.
Dhinaca kale shabakada “Sky Sports” ayaa xaqiijisay in Gareth Bale uu damacsan yahay inuu ku laabto Tottenham, kaddib markii lagu guuldareystay wadahadaladii uu ugu dhaqaaqi lahaa kooxda Manchester United.
Tottenham ayaa rajeyneysa inay Bale kaga soo qaadato Real Madrid heshiis amaah oo hal xilli ciyaareed ah, sida ay qoreen dhowr warbaahin oo Spain ah, waxaana la tilmaamayaa in wada hadalada ay ilaa iyo hadda meel fiican marayaan.
Madaxweynaha kooxda Lyon oo shaaca ka qaaday hadal layaab leh ee ku saabsan heshiiska uu Depay ugu biirayo Barcelona